KMF/Cnoe : »Mila fanabeazana ho olom-banona koa ny mpitondra » | NewsMada
KMF/Cnoe : »Mila fanabeazana ho olom-banona koa ny mpitondra »
Mirongatra ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa. Vahaolan’ny fitondrana ny fampahafantarana lalàna. Mila fanabeazana ho olom-banona koa ny mpitondra, raha ny fijerin’ny KMF/Cnoe.
« Iaraha-mahita ny gaboraraka manjaka eto amin’ny firenentsika amin’izao… Mampanontany tena ny rehetra hoe: misy ve ny fitondram-panjakana ary misy ve ny fampiharana ny lalàna eto amintsika manoloana ny tsy fandriampahalemana? »
Izay ny fanontaniana naroson’ny sekretera jeneralin’ny KMF/Cnoe, Raharisoamalala Patricia, manoloana ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao sy ny fitsaram-bahoaka tato ho ato. Eo koa ireny zava-nitranga toy ny tany Befandriana Avaratra, mampanontany tena hoe: aiza ho aiza ny fampiharan-dalàna eto amintsika?
« Matetika, rehefa miresaka isika hatramin’izay: saika ireo vahoaka madinika hatrany no tenenina amin’ny hoe tokony hobeazina amin’ny fanarahan-dalàna », hoy izy.
Tsy azo odian-tsy hita, anisan’ny olom-pirenena miaina eny anivon’ny vahoaka ireo tomponandraiki-panjakana rehetra: manomboka amin’ny lehibem-pokontany izany, ny mpitandro filaminana, ny mpampihatra lalàna, ny mpanao lalàna, ny mpitsara, ny mpitondra fanjakana… Indraindray, hadinon’izy ireo hoe tokony hanara-dalàna ihany koa izy ireo amin’ny fampiharana lalàna.
Mila fampiharan-tsazy ireo mpitondra tsy manara-dalàna
Tsy hoe ny vahoaka irery ihany no omena fanabeazana, fa eo koa ireo olom-boafidy sy olom-boatendry eny anivon’ny rantsa-mangaikan’ny rafi-panjakana tsirairay avy. Mila hamafisina koa ny fanabeazana azy ireny mba hahay tsara ny fampiharan-dalàna. « Raha misy ny mandika lalàna, tokony mba ho hita ampahibemaso ho fantatry ny vahoaka ny sazy ampiharina amin’izy ireo », hoy izy.
Amin’izany, misy ny fanabeazana ifanaovan’ny eny anivon’ny rafitra tsirairay avy. Misy koa ny fitsipi-pitondrantena. Tokony hisy rafitra iray manara-maso sy manasazy, raha misy ny fandikan-dalàna. Mba tena hitovy tokoa ny lalàna ho an’ny rehetra, fa tsy hisy olona hitan’ny vahoaka madinika hoe ambonin’ny lalàna. Ary tsy maintsy ianjadian’ny fampiharan-dalàna hatrany ireo tsy manan-katoraka manoloana ny kolikoly.